Ny Biraon'ny Fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana sy ny Biraon'ny fananganana dia faly miarahaba antsika rehetra. Manasa antsika rehetra ihany koa hiara-hiombom-bavaka amin'ny Alahadin'ny Mpitandrina izay atao ny Alahady 16 desambre 2018 izao. Heb 13:7 "Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin’Andriamanitra taminareo; hevero ny niafaran’ny fiainany, ka araho ny finoany." Koa andeha isika hifanome tànana ny amin'ny fanohanana ny Raiamandrenintsika. Andro iray natokana hanohanana azy ireo sy ho fitrotrona am-bavaka azy ireo ihany koa izany. Isika rehetra izay efa nahazo fahasoavana sy nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany tamin'ny alàlan'izany Raiamandreny izany.
Ny SAMITSARA eto amin'ny Fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana dia faly manasa antsika rehetra fa efa manomboka ny Alarobia 12 desambra 2018 izao ny fankalazana ny Krisimasin'ny sampana eto amin'ny FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Ary mitohy isaky ny hariva amin'ny 5ora hariva izany. Koa andeha isika hifanohana sy hifanotrona.
Misaotra anao mialoha ny amin'ny fanohananao sy ny fitondranao am-bavaka izany fotoana izany.
Ohabolana 4:5,6 "Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana; Fa aza hadinoina na ihemorana ny teny aloaky ny vavako. Aza mahafoy azy, fa hiaro anao izy; Tiavo izy, dia hitandrina anao."
Ny voninahitra dia hoan'andriamanitra irery ihany
"Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana ..."
"Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence; ..."
Toy izao ny vaovao sy ny fandaharam-potoana mandritra ity herinandro ity
Fandaharam-potoana mandritry ny herinandro
6 ora sy sasany: Maraim-baovao + Asa sy fampaherezana
9 ora: Asa sy fampaherezana
2 ora: Fotoan-tsarobidy
4 ora: Fianaran'ny Mpiomana
6 ora sy sasany: Maraim-baivao + Asa sy fampaherezana
2 ora: Fotoam-pifohazana
2 ora: Fianarana Katekomena
2 ora: Fianarana Soratra Masina
6ora sy sasany: Fidirana voalohany
9ora sy sasany: Fidirana faharoa
Ny Fiangonana Protestanata Vaovao eto Madasikara, Fiombonana Tsarahonenana dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo anie hoaminareo mandrakariva.
Ny Fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana dia faly mampahafantatra antsika rehetra fa tonga ny fotoana izay anantsika Pasteur raikitra eto amin'ny fiangonantsika. Koa andeha ary hifanotrona ny amin'ny fametrahana an'ny Pasteur Tahiana amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny Fiangonantsika. koa samia mitondra am-bavaka ny amin'ny fahatanterahan'izany isika rehetra. Mirary soa hoantsika hanao ny asa izay nampanaovin'ny Tompo antsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany
Avy amin'ny Komitin'ny faha-folo taona. Ilazana isika rehetra vahoakan'Andriamanitra izay manana archive na sary izany na horonan-tsary tamin'ny taona 2007-2017. Mba hanatona an'Atoa RANDRIANANDRASANA Roger, na ny vadin'ny Pasteur, na ao amin'ny secretairen'ny fiangonana mba henehoana ny tataran'ny fiangonana amin'ny alàlan'ireny sary ireny. Ary haverina aminao tompony ihany izany avy eo. Misaotra mialoha Tompoko. Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anareo.
Mijoroa hatrany fa Andriamanitra velona no tompointsika. Koa mirary soa antsika rehetra ary manao veloma amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavana amam-piadanany anie hoamintsika mandrakariva.
Mpitondra ny hafatra: RANDRIANANDRASANA Roger
1. Andry | 17/07/2014
Dia faly miarahaba antsika rehetra indrindra fa ny mpikarakara ny site web ny Fiangonana. Ny fahasoavan'ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva ary dia mampahery anareo izahay. Izy anie hanolo-tsaina sy henome fahendrena hoanareo.